Indlela yokufunda ukubona ikusasa wena ekhaya? Unokufunda njani ukubona ikusasa lakho?
Izindlela ezilula zokufunda ukubona ikusasa: ukusetyenziswa kunye namacebiso
Amakhono angaphezulu angaphuhliswa kwaye oku kuboniswa ngabantu abaninzi abaneliso lesithathu elivulekileyo. Wonke umntu unokubona ikusasa, kodwa oku kuya kufuneka kwenziwe. Ukuqeqeshwa rhoqo kunye noqeqesho kuya kunceda ukuphumeza iziphumo ezilungileyo. Ngokuqinisekileyo, ubukho bomcebisi abuzange bube bukhulu, kodwa uyazifunda.
Njengazo naziphi izifundo zokuzifunda, ukuphuhliswa kwamakhono okwedlula, kubandakanya ukukwazi ukubona ikusasa kufuna ukunakekelwa, ukuxinwa kunye nokubuyela ngokupheleleyo. Kufuneka uqeqeshwe imihla ngemihla kwaye wenze iimvavanyo ezithile. Ukongeza, zama ukucwangcisa ixesha lakho ukuze ngexesha loqeqesho akukho mntu uphazamise.
Amanyathelo okuqala omntwana osengqondweni
Ekuqaleni kuya kufuneka ufunde ukuzivakalelwa namhlanje, izolo nangomso. Kwinqanaba leemvakalelo, kufuneka uqonde ukuba le nto okanye eso siganeko sisexesha elithile. Ukuze wenze oku, zama ukukhumbuza kwincinci elincinane. Qala phambili. Khumbula ukusa kwakho: yiphi na ixesha ovuke ngayo, yintoni eyayiyenza loo ndlu ngelo xesha, ubona ntoni ngaphandle kwewindow, kwenzeni ukuba wenze ikhofi? Iinkcukacha zibalulekile - ukuthunga, ukuthanda, ukuvakalelwa.
Kubalulekile ukuba ubambe umva wezolo. Ukwenza oku, kufuneka uzithelekise wena namhlanje. Oko kukuthi, ukwenza inkqubo efanayo, kuphela ukukhumbula iziganeko ezenzekile kuwe namhlanje.
Ukuba konke kuvela, zama ukuzijonga ngezolo uze uthumele ulwazi malunga nekamva lakho. Enyanisweni, kufuneka uzinge kwilizwe ohlala kulo izolo. Ngendlela efanayo. Ukuba unokuyiva, isinyathelo sokuqala senziwe. Yenza lo msebenzi rhoqo ude ungene kalula kumbuso oyifunayo.
Emva kokuba ufunde ukuhlukanisa oko kwakukho, kwaye yintoni, unokuzama ukujonga kwikamva. Ngethuba lokuqala uqinisekiswa ukuba akukho nto iya kusebenza, kakuhle, ngaphandle kokuba uye wafihla inkulu enkulu, eyona kuphela kwaye ilindele ixesha elifanelekileyo lokuphuhlisa. Kodwa musa ukuyeka, kuba yonke into inexesha layo.
Hlala uze uvale amehlo akho. Kuyinto enqwenelekayo ukuba igumbi lingenakukhanya okukhulu, kuba kuya kuba nzima ukugxila.
Ngaphambi kokuba uvule umbhede omnyama, ubumnyama obugqibeleleyo, obuya kuba ngumfanekiso emva koko.
Ukuze yonke into isebenze, zama ukugxila ngokungangoko kunokwenzeka kulo mnyama. Yivayo, zama ukuchukumisa ngokwengqondo, ukuchukumisa kuye.
Emva kwexesha liza kuqala ukuhamba, kwaye awuyi kukwazi ukuqonda ukuba kuphi ukuqala kwayo, nokuba kuphi ukuphela. Kule ngongoma, mbeka ngengqondo umbuzo wakho. Kubaluleke kakhulu ukuba kubaluleke kakhulu.
Gxila kumbuzo wakho uze ukhangele ebumnyameni. Musa ukuluphazamisa amehlo akho, phumula, kwaye uvumele amandla ahambe ngokukhululekile.
Ukuba yonke into ihamba kakuhle, ebumnyameni uza kubona iincwadana, imifanekiso eya kuyenza kwifomati-mfanekiso.
Ekuqalekeni, konke kubonakala kulula, kodwa ubuchule buza kuphela ngamava. Kwixesha elizayo uza kufuneka ufunde indlela yokutolika imifanekiso. Ngenxa yoko kuyimfuneko ukuba uqaphele okwangoku, ukufuna iimpawu kunye neenkcukacha. Jonga iimvakalelo zakho, funda ukulawula iingcamango zakho kunye nokugxila, uze uphumelele.
IHososope ngenyanga kaDisemba ngamawele
Uthando lweHososcope lweCapricorn ngoJanuwari
I-Horoscope ngo-2010, amawele eentombazana
Indlela yokuphumelela intliziyo yendoda yesikhombi
Strawberry kunye noshukela